🥇 ▷ Gacan-qabashada ugu horreysa ee Galaxy Note 9 ayaa xaqiijineysa bateriga 4,000 mAh, halkan waxaa sidoo kale ku yaal astaamo (sawirro) ✅
Gacan-qabashada ugu horreysa ee Galaxy Note 9 ayaa xaqiijineysa bateriga 4,000 mAh, halkan waxaa sidoo kale ku yaal astaamo (sawirro)
Bilaabidda Samsung Galaxy Note 9 ayaa soo dhow, mana ahan wax lala yaabo in wararka ku saabsan ay daba socdaan mid kale. Ka dib kuwa ku saabsan duufaanta suurtagalka ah ee Fortnite Mobile iyo habka Samsung Dex ee aan u baahnayn doonin qalab dheeri ah, halkan waa gacmo-horaad ka yimid Reddit iyo sawirro aad u fara badan oo la xiriira aaladaha la socon doona bilawga filimka caanka ah ee soosaaraha Kuuriyada. .
Iyada oo gacanta ayaa lagusoo wariyay Reddit waxaan haynaa xaqiijin dheeri ah oo ku saabsan faahfaahinta aaladaha waaweyn ee aaladda: 6 GB oo RAM ah, oo ay suurto gal tahay 8 GB noocyo ah, xusuusta aasaasiga ah ee gudaha laga bilaabo 128 GB oo leh laba nooc oo kale (256 iyo 512 GB), waa isku mid kamarad ee S9 + oo leh OIS iyo astaamo cusub oo loogu talagalay kor-u qaadista durista iyada oo loo marayo AI, iyo baytariga gargantuan laga soo qaado 4,000 mAh taas oo, adeegsiga dhexdhexaadka ah, xitaa ballan qaadi doonta 4 maalmood oo iskeed ah.
AKHRISO: Galaxy Note 9 waa mid aad ugu dhow: kuwa horay u dalbaday waxay helayaan Agoosto 24-keeda
Waxaa jira S Qalin waxaa loo xakameeyaa Bluetooth, waxaana loo isticmaali karaa ficilada kala duwan ee fogfog sida sawiro qaadista, u dhaqaaqida wadada xigta ee muusikada, u dhaqaaqida slide-ka soo socda inta lagu jiro soo bandhigida PowerPoint. Marka tan la eego, ishaani waxay sidoo kale xaqiijineysaa maqnaanshaha agabyo dheeri ah oo loogu talagalay Samsung Dex: in la isticmaalo qalabka loo yaqaan ‘Galaxy note 9’ desktop desktop, adap-ku waa ku filan yahay inuu kuxiro fiilada HDMI. Waxaa jira tafaasiil dheeri ah oo xiisa leh oo xiisaha leh in kastoo: oo aan lahayn xirmada Xusuusin 9 waxay awood u yeelan kartaa inay maamusho ilaa 5 daaqado isku mar, oo ay ku jirto Dock Dex halkii ay ka ahaan lahayd 20.
Sida muuqata markaa taageero ayaa jiri doonta API Vulkan. Samsung ayaa diyaar u ah inay u keento seddex-kulan A (oo ay ku jiraan Fortnite dhab ahaan) aaladooda, si ay ula tartamaan ASUS, Razer iyo soosaarayaasha kale ee hadafkoodu yahay aaladaha mobilada ee ciyaartooyda. Iskuxirkaan waxaad ka heli kartaa wada hadalada ku saabsan gacan-qabashadaan ‘Reddit’. Waxaan ku soo gabagabeynaynaa annagoo tilmaamaya qaar ka mid ah sawirrada lagu soo qoray Twitter-ka Roland Quandt, oo la xidhiidha taxanaha cusub ee alaabada rasmiga ah ee loo qoondeeyay Samsung home phablet. Waxaan kuu soo bandhignay sawir hoose, halka WinFuture aad ka heli doontid duriyin kale oo badan.